Isticmaalka daroogada Spice oo aad u soo badanaya - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Isticmaalka daroogada Spice oo aad u soo badanaya
La daabacay torsdag 27 november 2014 kl 16.00
- Markii ugu horraysay ee naloo keenay dhallinyar ay macallimiintoodii la socdaan, waanu garan waynay wax ka qaldan dhallinyarada. Laakiinse waxa ay u eegaayeen kuwo ay balwadi ka muuqatay. Kadib baadhitaan baanu ku samaynay, waxaananu tijaabo ka qaadnay kaadidooda. Wax se natiijo ah maanu helin.
Kaasi waxa uu ahaa Juan Figueroa oo ah khabiir cilmi-nafsiga carruurta ku takhasusay, kana hawlgala xarunta daryeelka dhallinyarada mukhaadaraadka isticmaala ee Maria Ungdom Stockholm .
Daroogada loo yaqaano Spice ayaa si weyn ugu dhex faaftay bulshada, waxaanay gaysatay waxyeelo badan. Ilaa hadda afar qof ayaa u dhimatay waxyeelo ay u geysatay daroogadani. Laakiinse ilaa 30 qof oo maydkooda la baadhay baa laga helay daroogadan. Sannadkan waxa baadhitaan lagu sameeyay maydadka 15 qof, waxaana jidhkooda laga helay daroogada loo yaqaan cannabinoider ama spice. Sidaasi waxa sheegtay waaxda xuquuqda dawooyinka ee loo yaqaano, Rättsmedicinalverket. Isu gayn na waxa ay haayaddu sheegtay in tan iyo sannadkii 2010 baadhitaan lagu sameeyay maydadka 30 qof. Robin waa 19 jir, waxa uu sheegay in saaxiibkii dhawr jeer uu cabbay daroogadan loo yaqaano Spice. Isaga oo arrintaasi ka warramayana waxa uu yidhi;
- Guriga ayuu ku haystay. Mana uu san haysan lacag uu wax kale siisto. Sida xashiishad iyo wixii la mid ah.
Juan Figueroa ayaa sheegay in isticmaalka daroogadani uu soo caan baxay bilihii ugu danbeeyay, ayna durba jiraan noocyo badan oo ay daroogadani u kala baxdo. Isagoo arrintaasi ka hadlaya waxa uu yidhi;
- Dhallinyaro badani dan kama galaan marka ay cabbayaan daroogadan. Ma daneeyaan in ay sharci tahay iyo in ay sharcidarro tahay. Markay bilaabaan way cabbaan. In yar mooyee badida dhallinyaradu ma kala jecla Spice iyo Cannabis ta. Noocyo badan ayay daroogadani u kala baxdaa, waxaana maanta jira noocyo aan wali la aqoonsan.
Sida ay sheegtay haayadda caafimaadka bulshadu waxa jirta aragti muujinaysa in daroogan Spice siyaabo kala duwan loo samayn karo iyada oo lagu badhxayo maadooyin kale. Waxaanay haayaddu sheegtay in ay rajaynayso in sharci adag laga soo saari doono isticmaalka noocyada kala duwan ee daroogadan. Juan Figueroa ayaa isagu se aragtidaa ka soo horjeeda, waxaana hadalkiisii ka mid ah;
- Khatarta ay dhallinyaradu gali kartaa waa mid markasta ka weyn ta dadka waaweyn ku dhici karaan. Maaha in lala yaabo, waxaa laga yaabaa in dhallinyarada ay tani ku qasbayso xanuuno dhanka maskaxda ah oo u baahan in laga caawiyo. Carruurta waa in si fiican loo soo tarbiyadeeyaa marka ay yar yar yihiin ee ay joogaan xannaanadda.
In daroogadani si weyn ugu faaftay bulshada waxa laga garan karaa macluumaadka yaalla waaxda shaybaadhka danbiyada qaranka ( Statens kriminaltekniska laboratorium). Sannadkii 2012 waxa ay waaxda shaybaadhka danbiyadu gacanta ku dhigtay 1200 tijaabo oo laga baadhayay daroogada Spice. Sannadkii kaa ku xigayna waxa ay qaadeen 2600 tijaabo. Sannadkanna waxa ay tiradaasi gaadhay 2300. Baadhitaankaasina waxa ka soo baxday in sannadkii 2012 daroogo laga helay 394 ka mid ah tiradii tijaabooyinka lagu sameeyay, halka sannadkanna daroogo laga helay 69 ka mid ah tiradii baadhitaanka lagu sameeyay.